Ragga ugu quruxda badan adduunka: Kalfadhi, dhiirranaan iyo geesinimo leh ee qalbiga dumarka.
ragga ugu quruxda badan
Shaki la'aan, haweeney kasta waxay leedahay qof walba oo jecel oo jecel. Laakiin waxa dhacaya haddii shaashadaha ay hadda ka buuxaan barnaamijyo wacaya 10, 20 ama xataa 100 ka mid ah ragga ugu quruxda badan dunida oo dhan? Taasi waa sax, nasasho iyo ku raaxeysta jilicsanaanta, sababtoo ah giraanta fartaada - tani ma aha cudurdaar ah in la joojiyo in lagu dhiirigeliyo qurux badan! Waxaan soo uruurinay qiimeynteena caanka ah ee ugu quruxda badan. Waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso mabda'a qeybinta boosaska? Waxaan ogaanay in koontarool la'aanta ay tahay damaanad qaad ah farxad, sidaas darteedna waxaan ku kalsoonahay dareenka. Ku raaxeyso!
Jilayaasha ajnabiga - calaamadaha jinsiga 2014
Gerard Butler waa actor ah oo ka soo jeeda Iskotishka, oo magaciisa ku soo bandhigay filimkan sida "Muwaadinka Sharciga ah", "300 Spartans", "Runtii Qaawan", "PS I Love You". Iskuduwaha noocaas ah waxaa lagu sheegi karaa farshaxan, iyo sida nin. In kasta oo uusan si rasmi ah u guursan, bulshada internetka ayaa si joogta ah u daawanaya romance ee xiddiga filimka.
Jensen Ackles waa actor Maraykan ah oo leh xiniinyaha malaa'igta ku jira dhabarkiisa iyo muuqaal muuqda. Doorka ugu caansan wuxuu ka dhacay taxanaha "Supernatural" iyo "Maalmahay Nolosheenna". Inkastoo filimada dheeriga ah ee Exl aan loo baahneyn, wuxuu si weyn uga dhex muuqanayaa dhagaystayaasha haweenka daawadayaasha ah si aan caadi aheyn.
Johnny Depp waa qalbi macquul ah oo loo yaqaan 'heartthrob' kaas oo in ka badan hal mar hoggaamiyay liiska ragga ugu quruxda badan adduunka. Doorka actorka ayaa ku faraxsan taageerayaasha tayo leh, iyo quruxda quruxda badan. Inkasta oo Depp uu ganacsi ku jiray tobankii sano ee la soo dhaafay, tani ma saameyneyso soo jiidashada cayaaraha haweenka.
Calaamadda jinsiga cusub ee laga helay - Benedict Cumberbatch, oo ah actarka Ingiriiska, ayaa si dhaqso ah u burburay aduunyada filimka weyn. Inkastoo laba sano ka hor, dad badani si adag ugu hadlaan magaciisa, iyo lafdhabarta lakabka oo leh laf-dhabanno sare ma aysan keenin sharaf. Laakiin doorka Sherlock Holmes ayaa caddaynaya in caqli ahaan yahay jinsi ahaan. Cumberbatch ayaa si sahlan u horseeday ragga ugu quruxda badan adduunka sanadka 2014 sida laga soo xigtay Boqortooyada Ingiriiska.
Peter Facinelli - Jilaaga Maraykanka, oo loo yaqaano doorkiisa uu ku leeyahay "Twilight" iyo "Racing Criminal". Kalluumaysatadani waxay ku dhufatay qalbiyada gabdhaha leh roonaan, muuqaal qarsoodi ah oo aad u jilicsan, taas oo ay ka muuqato xusuusta ka timid dhiigga fanka talyaaniga.
Muusikada ugu quruxda badan
David Garrett waa shariif ah asal ahaan jarmalka casriga ah. Wuxuu ka ciyaaraa qalabka Stradivarius oo ah 1716, oo si daacad ah u dhuujiyay timihiisa dheer iyo haweenka soo jiidashada leh ee muuqaalka murugsan. Ma uusan daryeeyn: haddii uu istaagi doono marxaladda Royal Albert Hall ama uu ku ciyaaro jidka jidka, waxa ugu muhiimsan - inuu ku dhagaysto dhagaystayaasha muusiga. Sawirka farshaxanka ayaa u qalmaa rikoodhka ragga ugu quruxda badan ee muusikada.
Jared Leto waa heesaha bandhiga "30-ka daqiiqo ee Mars" iyo jilaa Oscar-ku guuleystay, oo ka mid ah Hollywood-ka oo dhan. Jared waxay si fudud u gashaa dhogarka haweenka ee leh dharka t-shirt, adigoo dhamaystiraya sawirada kabo quruxsan iyo koofiyad. Laakiin taasi kama horjoogsatid malaayiin taageerayaal ah oo ka cabanaya xorriyadiisa gudaha iyo kalsoonida.
Qiimeynta ragga ugu quruxda badan aduunka ee sanadka 2014 ma dhigi karo iyada oo aan la hayn heesaha ugu sareeya ee heesaha iyo cayaaraha Will Smith. Ciyaarta sheekada iyo jeesjeesku kama horjoogsanayn in Smith uu noqdo jilaa Hollywood ah oo si fiican u shaqeeya, heesaa hibo leh, iyo ugu muhiimsanaa seddexleyda dhimashada.
Jacaylka ra'yiga ragga casriga ah
Niyadjabinta haweenka ragga ah ee ka yar iyaga naftooda
Sidee looga takhalusaa nin la caajiso
Adigu ma cafiyi kartid, dib uma noqon kartid
Maxay dadku u ooyaan?
Maxay niman u jecel yihiin inay dib ugu noqdaan kuwii hore?
Fantasku waa riyo aan la dabooli karin?
Natasha Koroleva ayaa la barbardhigay xukuumadda Ukrayna oo leh jilayaasha sheekooyinka caanka ah
Qalab awood leh ee layliyada guriga
Soo kabashada jacaylka u dhexeeya laba qof
Miyuu halis u yahay jir-dilidda?
Lavash oo leh fasir beero
Waxaan hagaajineynaa boosaska jimicsiga caadiga ah
Dadka reer Meksiko shish kebab guriga
Sidee u dhigtaa ilmaha inuu seexdo?
Sida loo qallajiyo dharka iyo dharka?
Salad ka soo dabacsan iyo celery
Daaweynta xanuunka raagay raagay oo leh daaweyn dadeed
Olga Buzovoy oo ah sheeko cusub oo loo yaqaan 'To the sound of the blown' ayaa sababay fadeexad Instagram
Heerkulka koowaad ee uurka uurka
Sida loo noqdo baalal femme ah